शारिरीक सम्पर्क गर्दा किन महिलाले आखाँ चिम्लिन्छीन ? यस्ता छन् कारण
शारिरीक सम्पर्क दुई विपरित लिंगबीचको शारीरिक क्रिया मात्र होइन । यसमा शरीरसँगै भावना पनि जोडिएको हुन्छ । जब दुई व्यक्ति आपसमा इन्टिमेन्ट हुन्छन्, तब उनीहरुको दिल-दिमागमा केही प्रश्न उठ्छ । यौनका विषयमा हरेकसँग अनेक प्रश्न हुन्छ, तर यस सम्बन्धमा एकदमै कम व्यक्तिमात्र आफ्नो पार्टनरसँग खुलेर कुराकानी गर्छन् । अक्सर पार्टनरकाबीचमा एकअर्काको लागि केही किसिमका प्रश्न हुनेगर्छ ।
यौन सम्पर्कको बेला खासगरी पुरुषहरुको मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ, आखिर महिलाहरु किन आँखा चिम्लन्छन् ? कतिपयले आँखा बन्द नगर्न सक्छ । यदि आँखा बन्द गर्दैन भने केही न केही यौन समस्या छ भनेर पनि बुझ्ने गरिएको छ । कोहि महिलाले क्रिडामा आखा चिम्लिईनन भने उनले चरमसुख अनुभूत गरिरहेकी छैनन् या उनि मनमा कुनै पिर/डर लिएर सम्पर्कमा छिन।
त्यसो भए के यौन सम्पर्कको क्रममा महिलाले आँखा चिम्लनैपर्छ ? किन उनीहरु आँखा चिम्लन्छन् ? के छ यसको कारण ?
एक शोधबाट के थाहा भएको छ भने, जसै हाच्छि्यु गरिन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै नियन्त्रण हुँदैन । हाच्छ्यु गरिरहँदा हाम्रो आँखा बन्द हुन्छ, यो स्वतस्फूर्त हुने क्रिया हो । ठिक यसैगरी महिलाहरु यौनमा चरमसुखको बेला आँखा खोल्न सक्दैनन् । खासगरी यसबेला उनीहरुको ग्ल्यान्डबाट तरल स्रावित हुन्छ, जसले दिमागलाई आँखा बन्द गर्नका लागि सन्देश पठाउँछ ।
क्लाइमेक्ससम्म पुग्नमा दिक्दारी
यस्तो मानिन्छ कि, यदि दिमाग खुला रहन्छ भने महिलाको ध्यान पार्टनरमाथि पर्न जान्छ । यसले उनको ध्यानभंग हुन्छ । त्यहीकारण उनीहर क्लाइमेक्ससम्म पुग्न पाउँदैनन् ।
यौन सम्पर्कका क्रममा दम्पती एकअर्कावीच एकाकार भएको अनुभूत गर्छन् । उनीहरु आफुहरुवीचैका इन्टीमेसी र केमेस्ट्रीमा इन्जोए गरिरहेका हुन्छन् । यौन सम्पर्कका क्रममा उनीहरु पार्टनरलाई सहयोग र सुरक्षा महसुष गराउन चाहन्छन् ।
कारण लाज पनि
यौन सम्पर्कका क्रममा महिलाहरुले आँखा चिम्लनुमा लाज पनि एउटा कारण हुनसक्छ । यद्यपी यस्तो लाज भने पहिलो पटकको यौन सम्पर्कमा हुने गर्छ । आफुलाई सर्वाङ्ग बनाइरहँदा उनीहरु लजाउँछन् । असहज महसुष गर्छन् । त्यही कारण उनीहरु आँखा चिम्लन्छन् । खासमा भन्ने हो भने लभमेकिङका क्रममा महिलाहरुले आँखा चिम्लनु सामान्य कुरा हो ।
प्रकाशित मिति: मंगलवार, माघ २०, २०७७, १०:०८:००
नेपालमा कोरोना: ५ जना को मृत्यु, ९४ जना संक्रमित थपिए
नेपालमा कोरोना: ४ संक्रमितको मृत्यु, ११० सङ्क्रमित थपिए, १०२ कोरोनामुक्त
नेपालले किनेको दश लाख डोज खोप काठमाडौं आइपुग्यो
सरकारले खरिद गरेको २० लाख डोज खोपमध्ये आईतबार १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप नेपाल आइपुगेको छ । एयर इन्डियाको विमानमार्फत कोभिशिल्ड खोप दिउँसो नेपाल आइपुगेको हो । यो खोप प्राथमिकताको आधारमा लगाईनेछ । नेपाल सरकारले सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासंग फागुन ५ गते २० लाख डोज खरिदका लागि सम्झौता गरे अनुसार १० लाख डोज आइपुगेको हो । पुरा पढ्नुहोस्
नेपालमा कोरोना: ८० सङ्क्रमित थपिए, १२१ कोरोनामुक्त
नेपालमा कोरोनाभाइरसका ८० जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा तीन हजार ३२५ जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा ८० जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो । पुरा पढ्नुहोस्